Shabeelaha Dhexe,Koonfura iyo bartamaha Soomaaliya - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Shabeelaha Dhexe,Koonfura iyo bartamaha Soomaaliya
MSF waxa ay daryeel caafimaad oo aasaasi ay ku bixisaa shabakad ka kooban afar xarumo caafimaad ah oo ku yaalla degmooyinka Jowhar, Mahaddaay iyo Balcad. Xarumaha caafimaadku waxa ay bixiyaan adeegyo bukaan-socod oo ka hortag iyo caafimaadba; daryeelka hooyada iyo carruurta; iyo barnaamij ballaaran oo tallaalka loogu bixinayo xarumo caafimaad oo wareega iyo kuwa dhisan. Waaxda haweenka ayaa hooyooyinka caadi uga umulisa; waxaana ay adeegyo qalliin-kaga-umulin, qorsheyta qoyska iyo daryeelka dhibanayaasha rabshadda jinsiga isugu jira. Waxaa sidoo kale jira barnaamij nafaqeyn oo leh xarun baxnaanin iyo daryeel bukaan-socod.
Sanadkii 2009kii, 118,968 qof ayaa heley la-talin caafimaad iyo daaweyn lacag la’aan ah waxaana 26,542 ay la-talin caafimaadka ee ka horreysa iyo tan ka dambeysa dhallidda ay ku heleen bukaan-socod-eegtada. In ka badan 5,336 oo carruur ay hayso nafaqo-xumo ba’an ah ayaa la aqbaley xarunta quudin ku daweynta si looga daweeyo nafaqo-xumada iyo xannuunada la xiriira. Carruur tiradoodu gaareyso 1,666 ayaa lagu dhaley waaxda hooyooyinka. Bishii Luulyo ayaa kooxaha MSF ay wax ka qabteen jadeeco ka dilaacdey Jowhar, iyaga oo in ka badan 1,000 ku daweeyey xerooyinka dakda gudaha ku barokacay ee Jowhar dhexdeeda ku yaalla halka 3,756 ay ku daweeyeen Balcad, Warshiikh iyo Ceel Macaan. 62,132 carruur ah ayaa la tallaaley.
Wararkii ugu danbeeyay ee Mashruucyada MSF ee Gobolka Shabeelaha Dhexe